Miampy ny fanenjehana an’i Raja Petra Kamarudin (RPK) · Global Voices teny Malagasy
Miampy ny fanenjehana an'i Raja Petra Kamarudin (RPK)
NandikaHarentsoa Tsiky Rakotoson
Voadika ny 11 Marsa 2019 3:49 GMT
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny volana Oktobra 2009)
Misy ny raharaha ara-pitsarana vaovao mety hanampy trotraka ireo fiampangana fanalam-baraka sy fitoriana fanalam-baraka hanenjehana an'i Raja Petra Kamarudin (RPK). Nitatitra ireo mpanao gazety vao haingana fa nametraka fitoriana azy tany amin'ny polisy ny Departemantan'ny Fampandrosoana ny Islamika (Jakim) sy ny sampana Miozolomana hafa noho izy voalaza fa nanevateva ny Maley, ny Miozolomana sy ny Silamo.
Hita ao amin'ny tranonkalany efa nakatona, “Malaysia Today” (raha hitady fitaratry ny tranonkala, tsindrio eto) ny lahatsoratra voalaza manao hoe, “Mampanantena ho Miozolomana tsara fanahy, tsy mpihatsaravelatsihy aho” ary “Tsy ny Arabo rehetra no taranaky ny Mpaminany”.
Toa nilaza ny tale jeneralin'ny Jakim, Datuk Wan Mohamad Sheikh Abdul Aziz hoe: “Manohintohina ireo lahatsoratra ireo ary toa maneho ny feon'ny olona izay tsy mahatakatra ny finoana silamo ary mitovy amin'ny fomba fijerin'ny media tandrefana. “
Anisan'ireo fikambanana hafa nametraka fitoriana an'i RPK ny Departemantan'ny Fivavahana ao amin'ny Faritany Federaly, ny Islamic Da ‘Wah Foundation Malaysia ary ny Filan-kevitra Islamika ao amin'ny Faritany Federaly.
Ho valin'izany, dia toa nitatitra i RPK hoe: “Tsy mahadona ahy intsony ireo raha miantso ahy anti-Islam, anti-Malay, anti-Umno… afaka miantso ahy ho anti-Andriamanitra izy ireo, raha izay no tiany”
Raha nilaza ny sasany fa tezitra ny mpikambana sasantsany tao amin'ny kabinetra rehefa namaky ireo lahatsoratra voalaza, dia nisy kosa ireo mpanao hevitra tao amin'ny Malaysia Today mihevitra fa tsy nikendry ny vahoaka miozolomana amin'ny ankapobeny ilay lahatsoratra voalaza fa vitsivitsy ihany.
Tamin'ny volana Aogositra tamin'ity taona ity, nitatitra ny Minisitry ny Departemantan'ny Praiminisitra, Datuk Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz, fa adidin'ny governemanta ny manakana izay hetsika rehetra manohintohina ny fitonian'ny firenena. Toa nilaza hono izy hoe: “Eto amin'ity firenena ity, miankina amin'ny fomba fijery avokoa ny zava-drehetra… Ka tsy misy olona ho tezitra. Tsy hoe tsy azonao atao ny miady hevitra, saingy tsara kokoa raha tsy atao ampahibemaso ny firesahana zavatra saro-pady.”
Nahitana tranga maromaro momba ny fanalam-baraka, fanadihadiana momba ny fikomiana sy ny fanalam-baraka heloka bavava tamin'ireo bilaogera sy olom-pirenena Maleziana tamin'ny taona lasa. Mety hitarika amin'ny fanagadrana azy tsy misy fitsarana araka ny Lalànan'ny Fiarovana Anatiny ao Malezia 1962 (Anglisy / Bahasa Malezia) ny fanadihadiana momba ireo tatitra vaovaon'ny polisy. Mandritra izany, toa manjaka ao amin'ny firenena ny disadisa ara-poko sy ara-pivavahana.
Tsy dia mahagaga be loatra raha nihemotra laharana faha-124 i Malezia tamin'ny taona 2007 tao amin'ny Tondro momba ny Fahalalahan'ny Gazety Manerantany avy amin'ny Reporters Sans Frontières raha laharana faha-92 tamin'ny taona 2006. Nahita ny fikarohana vao haingana nataon'ny Foibe ho an'ny Asa fanaovan-gazety mahaleotena sy ny foibe Merdeka fa maniry fahaleovantena bebe kokoa ho an'ny fampitam-baovao ny 87% tamin'ireo Maleziana natao fanadihadiana. Mandritra izany, nitatitra ny Bloomberg fa nampitandrina ireo mpampiasa vola mba hiala ao Malezia noho ny toe-java-misy ankehitriny ny Credit Suisse.
Lahatsoratra notsongain-ny GV Mpisolovava, tetikasa iray miaraka amin-ny Global Voices, miaro ny fahalalahana miteny sy miady amin-ny sivana antserasera ity. · Lahatsoratra rehetra
Tantaran'ny Malezia farany
Miatrika fanadihadiana noho ny sarimihetsika fohy mampiseho ny herisetra nataon'ny polisy ireo mpanakanto sy mpikatroka Maleziana
3 herinandro izayAzia Atsinanana
Lisitra nandaharana sarimihetsika maitso: Sarimihetsika fohy aziatika miresaka tontolo iainana
20 Mey 2021Azia Atsinanana
Mpanakanto Maleziana roa miatrika ny famotopotoran'ny polisy noho ny fanehoan-kevitra an-tserasera sy ny zavakanto
3 andro izayAfrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana
Nesorina tamin'ny asany tamin'ny didim-panjakana navoaka andro alina ny sojabe notendren'ny governemanta
10 Novambra 2015Fahasalamàna
Tambavy, raokandro, fangaro sy ireo torohevitra entina manasitrana omen'ireo renibe manerana izao tontolo izao